Indlela yokudweba iiKhathuthi zeDummies
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Funda ukudweba
Indlela Yokudweba Iikhathuni zeDummies I-Easy Way
Ukudweba iiKhathuthi zeDummies
Iimpawu zendlela zendlela yokubonisa ubuchule kwaye ingaba yindlela yokufumana imali eyongezelelweyo. Enyanisweni, nabani na oqalayo abangenakulindela ukuba bafikelele ngokukhawuleza udumo kunye nenzuzo ngemifanekiso, kodwa kulula ukuba uqalise. Iimpawu zepopayi zinomdla kunye nabantu bonke ubudala. Iibhotoli zingabantwana kwaye zihlekisayo. Bangakwazi nokuba yizopolitiki okanye ezentlalo, kwaye bahlale behlekisa.
Enyanisweni, iikopi zisebenzisiweyo ukubonisa ingqalelo kwiimeko zezopolitiko, ezentlalontle kunye nezosingqongileyo ngendlela ehlakaniphile kunye nehlazo.
Xa kuziwa kwikhathuni, kukho iziganeko xa ubuchule kunye nobunzulu buyindlela engcono kunobungqina bomelele obunzima kunye nobungqina. Lo ngumzekelo xa ubusi beza kutsala iintlanzi ezininzi kunewayini. Xa kuziwa kobugcisa, abakhandi beemifanekiso badumiwe ngaphantsi kwemifanekiso yabo, nangaphezulu ngomyalezo wabo. Ukuba uya kwiNew Yorker kwaye upheqa kwiimifanekiso, uya kuphawula, nokuba i-New York Times, ukuba ezinye zeemidwebo ziwela kwicandelo leBakala 4!
Njengabaninzi beemifanekiso, akukho nto imfuneko yokuba ube nekhono lobugcisa okanye ukuba nekhono elingenakukwazi ukuludweba kakuhle. Yintoni efunekayo ngokwenene kukuba isimo sengqondo sokwenza into ekhupha umyalezo. Nazi iinqununu ezintlanu onokuzilandela ukuqala ukudweba iikhathuni:
1. Ukuphuhlisa nokuguquka
Abadlali beCattoon abanabo bonke abaculi abakhulu. Akunabo bonke abakhulu ekudwebeni. Kunceda ukuba uyakwazi ukudweba, kodwa ukuba kungenjalo, ngoko ungaqala ngeziphi izakhono onayo kwaye uphucule umzobo okanye umlinganisi njengoko uhamba.
Oku akuthethi ukuba unako ukuhamba kunye nabalinganiswa beentambo.
Isiphumo sakho sokuqala asiyi kuba njengephosikiweyo njengoko ungathanda. AbaCattoon bahlakulela ubugcisa babo ngeminyaka yokusebenza. Ngokuphuhliswa komgca kunye nencoko yababini, imidwebo iyakhula. Ezi ziphuculo ezifihlakeleyo ngendlela abalinganiswa ababethe ngayo, okubonakala kuphela emva kweminyaka yemidwebo.
Qala ngengcamango engundoqo yomdlali. Umdwebo olula wobuso kunye nomzimba, kunye nesimo esicacileyo. Kulungile ukuba bonke abalinganiswa bakho babukeka ngokufanayo. Ingxoxo kufuneka ikwazi ukwahlula phakathi kwabo. Okanye kwezinye iziganeko, abalinganiswa abafana nabo baba yinxalenye yebali.
2. Ukugqithisa, kodwa kungabi kakhulu
Uninzi lwabadwebi be-caricaturists lugxininisa imifanekiso yabo. Ngokukodwa, ukunyanzeliswa kwimiba ecacileyo yomntu. Ubuntu banoloko bunomnye okanye ezimbini izinto ezivame ukuzenza zime. Iipumlo, amaqabunga, i-chinft cleft, okanye iindlebe zibe yinto ebonakalayo. Ezi ziguqulwa ukwenzela ukuba umbukeli uza kubona ngokukhawuleza umzobo nobuntu obudumileyo. Ukunyanisela kusetyenziswa ukwenza umzobo obonakalayo. Iikhathuni zivame ukusebenzisa olu qhinga ngendlela engaphezulu.
Igama elilumkiso, nangona kunjalo: unako ukunyanisela kodwa kufuneka uzame ukungena kwi-overboard. Ekugqibeleni, ukuba umzobo uyimpumlo kuphela, ngoko unokuba nabani na.
Ukuba umzobo uyimifanekiso, zama ukuyenza ibe ngumdlalo ngaphandle kokungahloneli. Ukuba isetyenziswe njengomgca weehlaya, ungenza lula imidwebo yakho ukwenzela ukuba ibonakale ngokufanelekileyo kumxholo wesitayela sokudweba.
3. Yakha ibali elityebi
Unokwenza okungakumbi kwi-cartoon. Cinga nje ngebali elifutshane kakhulu elihlanganiswe nesakhelo esisodwa - ukuba i-caricature - okanye ukuya kuma-amane amafowuni omdlalo wee-comic. Ukuba unombali omnandi okanye ihlaya awudingi ukuba ngumculi obalaseleyo. Vumela ibali livule. Kananjalo akudingeki ukuba uchaze yonke into. Umfundi kulindeleke ukuba akwazi ukuqonda iingxelo. Hamba ngqo, uze uthembele umfundi ukuba awuchaze ngendlela efanayo nokuthumela kwakho ibali.
4. Mema impendulo
Imidwebo yakho ayiyi kubhena bonke abantu. Nangona kunjalo, ukuba imidwebo ibonisa isithembiso uza kukwazi ukufumana amazwana avela kubafundi.
Kulungile kodwa, kufuneka ubonise amalungu omndeni okanye abahlobo abazimisele ukunikela ingcamango engacatshanganga.
5. Qala ukudweba ngcono
Emva kokuba ufumene i-hang of story story, uzinike ixesha elithile ukuba usebenzise ukudweba abalinganiswa. Unokwenyama ngaphandle komzobo uze wenze i-3D ngakumbi. Ungatshintsha indlela, kunye nokukhanyisa, iingongoma kunye neembono. Unako ukunamathela kwisakhiwo se-2D, kodwa kuya kuba ngcono ukuba unokwazi ukwahlula phambili, into ejoliswe kuyo kunye nokuxhaswa. Ngamanye amaxesha isakhiwo esicacileyo sokuqhaqha i-cross-hatch singenza imimangaliso ngemvelaphi.
Qonda ukuba iimifanekiso zinobuchule obonwabisayo kunye nenzuzo . Ziyakwazi nokuba yindawo yokuzonwabisa kunye nezemfundo. Kufuneka uzame ukuzonwabisa xa usenza.
Ndifuna Ukudweba .... Kwi-Absolute Beginner
Indlela yokudweba i-Cartoon Super Hero
Indlela yokudweba i-Cartoon Tough Guy
Amanyathelo malunga nendlela yokufaka i-Spray Fixative to Artwork
Indlela yokudweba i-Wolf Majestic
Iingcebiso zokuBonisa iiHlabathi zasebusika
Indlela Yokudweba Isinyithi NgePencil Color
Funda indlela yokudweba i-Chrysanthemum Bloom
Dweba iNzantyambo yeTropical - Indlela yokudweba i-Cartoon Tropical Fish
Funda Ukudweba Umzekeliso Wabantu - Iproportion and Parts Parts
Funda indlela yokudweba kwi-Pen kunye neNk
Indlela yokusebenzisa umsebenzi okanye inkqubo njengeParameter kwelinye imisebenzi
Ixesha elithi "uLwimi" kwiiLwimi
Iingcamango Zombulelo Wokubonga
Ukuhlaziywa kweBridgestone Blizzak WS80
Ulungelelwano lwesiLatini AD
Iintetho ezihlangeneyo ngeSpanish
Abakhenkethi beeNdwendwe: Ziziphi iiBhunga zamaKristu ezifunekayo kwiNdlela
Ndiyilinganisa njani i-Canvas kwi-Roll ye Painting?
Okanye M? Ukwahlukana Phakathi kobuNtu kunye noMlalality
Indlela yokufunda nokukhumbula
Ngubani owafaka i-iPhone?
Amaphephancwadi amaKristu aphezulu
10 amazwe kunye ne-Highest Voter Turnout
URutherford B Hayes Amazwi Okufutshane
Imidwebo yePatent kaGarrett uAgasus Morgan
Uhlobo lweGalufa: I-Las Vegas Scramble
Igrama ngeNgesi Inkcazo kunye nemizekelo
Iinjongo ze-IEP zexabiso leNdawo
Isicwangciso seSicwangciso Isinyathelo # 3 - Umyalelo othe ngqo
Ukuhlaziywa kweCuban: Ukuhlaselwa kwiiNqila zeMoncada
Ukuphuhlisa i-Mindset ye-Growth kuBafundi ukuVala ukuPhumelela kweGap
Iimfazwe zeNguqulelo yesiFrentshi: iMfazwe yeNayile
Iilwimi zesiTaliyane: Abbracciarsi
I-Gustavus Adolphus College Admissions